MINIX NEO Storage Pro, adabtarada leh SSD, Thunderbolt 3, USB iyo HDMI | Waxaan ka socdaa mac
MINIX NEO Storage Pro, adabtarada leh SSD, Thunderbolt 3, USB iyo HDMI
Waxaan tijaabinay adabtarada 'MINIX NEO Storage Pro' kaas oo wuxuu ku siinayaa wax kasta oo aad ugu baahan tahay MacBookgaaga hawada ama Pro: 4K 60Hz HDMI dekedda, Thunderbolt 3 dekedda, dekedda USB-A iyo 480Gb SSD kaydinta wixii ku kacaya qalab fudud oo disk ah.
1 USB-C, waa yaab laakiin dhibaatooyin leh
2 MINIX NEO Kaydinta Pro, xalka ugu habboon
3 Yar oo si fiican loo dhisay
USB-C, waa yaab laakiin dhibaatooyin leh
Dekedda USB-C waa shaki la'aan inay tahay dekedda ugu fiican ee aan ka codsan karno aaladahayaga hadda, iyo haddii ay sidoo kale la kulanto qeexitaannada Thunderbolt 3 sida ku jirta MacBook Air iyo Pro, faa iidooyinkiisa lama tirin karo:
Xawaaraha gudbinta ee gaaraya 40Gbps
Soosaarka fiidiyowga ee hal kormeere 5K 60Hz ama ilaa laba kormeere 4K 60Hz
Ku amraya laptop-ka
Xiriir caalami ah iyo mid aan mulkiyad lahayn
Laakiin illaa iyo inta soo-saareyaasha oo dhami ay qaataan halbeegga warshaddan iyo qalabkeenna ay cusbooneysiiyaan kuwa kale ee leh xiriir noocan ah, waxay u maleyneysaa taas haa ama haa waxaan u baahan doonaa hal ama in ka badan oo la qabsado ah leh xiriiro "caadi ah" oo kala duwan. Adeegsade kasta oo MacBook Air ah ama Pro leh xiriir noocaan ah waa inuu si dhakhso leh ama goor dambe u raadsadaa adabtarad xallisa dhibaatooyinkaas, tanna MINIX NEO Storage Pro ayaa ku siineysa waxyaabaha lagama maarmaanka u ah inta badan dadka isticmaala.
MINIX NEO Kaydinta Pro, xalka ugu habboon
Dhibaatooyinka ugu caansan ee ay la kulmaan isticmaale MacBook ah oo kaliya leh Thunderbolt 3 waa qalabyo leh xiriir USB-A ah, iyo kormeerayaal xiriir HDMI ah. Laakiin sidoo kale waxaa jira dhibaato kale oo weyn: qiimaha keydka SSD ee Apple aad ayuu qaali u yahay marka laga hadlayo ballaarinta laptop-kaaga, sidaa darteed dadka isticmaala badankood waxay doortaan inay ku iibsadaan MacBook-kooda ugu yar uguna isticmaali karaan darawalada banaanka si ay u balaariyaan.
Hal deked Thunderbolt 3
Hal dekedda USB-A 3.0
Mid ka mid ah dekedda HDMI (4K 60Hz)
480Gb SSD xawaaraha kaydinta ilaa 400Mbps
Faahfaahinta haysashada dekedda Thunderbolt 3 waa mid aad muhiim u ah. Inta badan adapters-ka noocan ah badiyaa waxay na siinayaan isku xirnaan fudud oo USB-C ah oo xaalado badan oo kaliya u adeegta inay dib u soo buuxiso MacBook-keena, haddii ay u oggolaato wareejinta xogta waxay ku sameysaa tilmaamo liita, sida USB 3.0 ama ugu badnaan USB 3.1. MINIX waxay haysaa waxqabadka isku-xirayaasha Thunderbolt 3 Waad ku mahadsantahay inaad nooga tagto deked noocaan ah adabtaradaada. Dekeddan waxaan ku xiri karnaa 5K 60Hz kormeere ama laba 4K 60Hz oo kormeerayaal ah waxaanan ku raaxeysan karnaa xawaaraha gudbinta xogta ee gaaraya 40Gbps oo waxaan ka qaadi karnaa laptop-kayada awood koronto oo dhan ilaa 100W.
Yar oo si fiican loo dhisay
Muuqaal kale oo muhiim ah waa tayada dhismaha, iyo tan MINIX NEO Storage Pro waxay ku heleysaa darajo heer sare ah qaybtaan. Aluminium Anodized leh laba dhammeystiran (cirro iyo qalin) oo u dhigma midabada MacBooks-ka. Isafgarad iyo iftiin, waxaan ku geyn karnaa meel kasta, iyo sidoo kale mahadsanid bacda gaadiidka ee ay keento, si fiican ayaa loo ilaalin doonaa xagashada xagashada.
In kasta oo aan heli karno adabtarada leh tiro badan oo isku xirnaansho ah, tan 'MINIX NEO Storage Pro' waxay bixisaa waxa inta badan adeegsaduhu u baahan yihiin, midna aan ka badnayn ama ka yar, iyo sidoo kale ballaarinta awoodda kaydinta ee 480Gb oo runtii u leh raasamaalkeena MacBookga iyo Pro . Tayo dhismeed aad ufiican oo xaqiiqooyin aad ufiican ka dhig mid ka mid ah adapters ugu xiisaha badan ee aan ka heli karno suuqa waxqabadka iyo qiimaha. MINIX waxay rabtay inay soo saarto badeecadan iyada oo loo marayo mareegta lacag-ururinta ee Indiegogo oo lagu bilaabayo $ 8 shixnadaha adduunka oo dhan (isku xirka). Waqtigan xaadirka ah laguma heli karo qiimahaas, waa qiime $ 119, taas oo wali ah qiimo aad u weyn. Dhamaadka bisha Luulyo waxaa lagu iibin doonaa Amazon iyo qeybiyeyaasha rasmiga ah qiimo dhan € 149.
MINIX NEO Kaydinta Pro
Tayada iyo waxqabadka isku xirnaanta
Yar yar oo is haysta
Kaydinta SSD isku dhafan
Waxay ku fadhidaa labada isku xir ee Thunderbolt 3 ee ku yaal MacBook Air iyo Pro 13 ”
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » MINIX NEO Storage Pro, adabtarada leh SSD, Thunderbolt 3, USB iyo HDMI
Qalabka watchOS 7 waxaad ka mari kartaa tuubbooyinka Apple Watch
Apple si ay u wada-soo-saaraan riwaayad-cilmi-nafsiyeed "Losing Alice" oo loogu talagalay Apple TV +